त्रिशूलीबाट जिवितै उद्दार गरिएका बिनयको यस्तो बयान जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
त्रिशूलीबाट जिवितै उद्दार गरिएका बिनयको यस्तो बयान
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–४ बाँदरे घुम्तीनजिकै विनय र उनकी पत्नी जमुनाले एक/एक छोरा च्यापेर त्रिशूलीमा हा मफा लेका थिए। त्यसलगत्तै स्थानीय रिसोर्ट र होटल सञ्चालकले विनयलाई जी वितै उद्धार गरे। जमुना मृ त अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। अन्दाजी २ सय मिटर तलसम्म बगेका दुवै बच्चा शुक्रबारसम्म पनि भेटिएका छैनन्। प्रहरीले शुक्रबार बिहानदेखि खोजी गरेको थियो। बिहीबार साँझदेखि वर्षा भइरहेको र नदी धमिलो रहेकाले उनीहरूको खोजीमा कठिनाइ भएको इलाका प्रहरी गजुरीले जनाएको छ।
दे त्या गको तयारीसाथ उनीहरूले घर छाडेको खुलेको जिल्ला प्रहरी धादिङका प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए। ‘थानकोटस्थित घरमा सिरानीमुनि रहेको नोट प्रहरीले बरामद गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा व्यवसाय गर्दा थुप्रै ऋण लागेको र ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर यस्तो बाटो रोजेको उल्लेख छ।’
घटनाको अनुसन्धानका लागि विनय गजुरी प्रहरीको हिरासतमा छन्। ‘उनीहरू योजनाबद्ध तरिकाले दे त्याग गर्न निस्किएका रहेछन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रेग्मीले भने, ‘सुरुमा बच्चालाई छाडेरै जाने सल्लाह गरे पनि आफूहरू नरहेपछि बच्चाको बिच ल्ली हुने सोचेर उनीहरूसहित देहत्यागको प्रयास गरेको विनयले प्रहरीलाई बताएका छन्।’ उनीहरू कसरी दे त्याग गर्न बाध्य भए र त्यसको पछाडि अरू के–के कारण थिए भनेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
विनयले सुरुमा आफू मात्रै दे त्याग गर्ने योजना पत्नीलाई सुनाएका थिए। जमुनाले ‘सँगै बाँच्ने सँगै म र्ने कसम खाएको’ भन्दै आफू पनि दे त्याग गर्ने अडान लिइन्। विनयले ‘दुई अबोध बालकलाई कसले हेर्ने ? तिमी त बाँच्नुपर्छ’ भने पनि जमुनाले मानिनन्। विनयले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार जेठो छोरो आफूले च्यापे भने कान्छो जमुनाले।
‘ऋणबारे हामीलाई थाहा थिएन। तनाव भए पनि त्यस्तो अ प्रिय निर्णय लेला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं’, दाजु नाता पर्ने हरिहर लामिछानेले भने, ‘पहिला कलेज पढाउँथ्यो। अहिले कमोडिटी व्यापार गर्दै आएको थियो। एक्कासि सोच्दै नसोचेको घट ना भोग्नुपर्‍यो। जे नहुनु थियो त्यो भयो, अब विनयलाई सम्हाल्नु छ।’
विनयले व्यवसाय गर्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेर द त्यागको बाटो रोजेको हुन सक्ने धादिङका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए। ‘उनले ऋण लिएका व्यक्तिहरू को–को हुन् ? तिनीहरूले कसरी ऋण दिएका थिए ? त्यो पनि हामी अनुसन्धान गर्दै छौं’, उनले भने, ‘बजारमा अहिले मिटरब्याजका कारण पनि यो घटना भएको हल्ला चलेको छ। त्यसैले विनयले बनाएको सूचीलाई हामीले गोप्य राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
केटा मान्छे होसमै थियो। केटी मान्छेको खुट्टा समाउँदै सँगै बग्दै रहेछन्। मैले मेरो कायकमा समाउन लगाएँ। केटी मान्छेलाई आफैं समातेर पाखामा ल्याएँ। उनीहरूलाई बाहिर ल्याउँदा केटी मान्छे बे हो स थिइन्। सायद उनको नि धन भइसकेको थियो। उनीहरूलाई पाखा ल्याएपछि मात्रै दुई बच्चा पनि थियो भन्ने थाहा पाएँ। मैले नदीमा भने देखिनँ। पुलमा बस्नेहरूले बच्चा पनि ब गेको देखेका रहेछन्। अलिक तलसम्म त पुगेर खोजी गर्‍यौं तर बच्चा फेला पार्न सकिएन। (बेनीघाटका कायक चालक श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानी)